Hordhac: Man City v Hull City – Wadaniyiinta Oo Doonaya Inay Wadada Guusha Ku Soo Laabtaan.
Kulanka: Manchester City v Hull City
Garsoore: Jon Moss
Barbarihii ay Manchester City la gashay Chelsea isbuucii hore ayaa ka dhigtay tartanka horyaalka mid weli meeshiisii ah waxaana labada kooxood u dhaxeysa shan dhibcood, la yaabna ma noqon doonto in caawa ay sidaasi sii ahaato farqiga labada kooxood ee hogaanka ku tartamaya u dhaxeeya.
Chelsea ayaa laga filan karaa inay ka gudbaan kooxda dhibtooneysa ee Aston Villa, halka aan la qiyaasi karin in Manchester City ay wax aan guul aheyn gurigeeda kala kulanto kooxda Hull City.
Manchester City weli waa ay ku daba jiraan koxoda hogaanka heysa, laakiin waxaa xadidan sibxashada labada kooxood ee tan iyo bisha May.
Xiddigaha Manchester City Samir Nasri iyo Eliaquim Mangala ayaa ku soo laabtay kooxda ka dib markii ay dhaawacyo ka soo kala kabsadeen.
Xiddigaha Ivory Coast Yaya Toure iyo Wilfried Bony ayaa weli ku maqan koobka Qaramada Afrika iyagoo ka caawiyay xulkooda inay u soo baxaan finalka.
Hull ayay u badan tahay inuu ka maqnaan doono xiddigii ay la soo wareegeen maalintii ugu danbeysay ee suuqa kala iibsiga Dame N’Doye kaasoo weli sugaya ogolaansho uu ku ciyaaro.
Weeraryahanka kale Nikica Jelavic ayaa isna maraya baaritaan caafimaad xilli danbe oo maanta ah, halka Mo Diame uu dhaawac weli ku maqan yahay.
Manchester City (4-2-3-1): Hart; Sagna, Demichelis, Kompany, Clichy; Fernando, Fernandinho; Milner, Silva, Nasri; Aguero.
Hull City (4-4-2): McGregor; Robertson, Davies, Dawson, Elmohamady; Meyler, Huddleston, Livermore, Ramirez; Jelavic, Hernandez.
Falanqaynta Kulanka Ku Celiska Ah Ee Bolton Wanderers Vs Liverpool Ee FA Cupka Wareegiisa Afraad
Kulanka: Bolton Vs Liverpool, ku celiska FA Cupka wareegiisa Afraad
Liverpool ayaa u safraysa kooxda Bolton kulanka ku celiska ah ee FA Cupka wareegiisa afraad. Bolton ayaa Liverpool oo Anfield joogta ku qasabtay inay kulan ku celis ah kula ciyaarto gurigeeda.
Inkasta oo ay Liverpool aad ugu gacan saraysay kulankii hore ee Anfield ka dhacay ayay haddana ku guuldaraysatay inay wax gool ah ka dhaliso,waxayna ku kala baxeen barbaro gool la’aan ah.
Bolton ayaana Liverpool markeeda ku soo dhawayn doonta garoonkeeda Macron Stadium.Liverpool ayaa marka ay Bolton la ciyaarto ay sugayaan kulamo adagi, waxayna la ciyaari doontaa Everton iyo Tottenham inta aysan bilaabin kulamada Europa Leaque ee ay la ciyaari doonto kooxda ree Turkey ee Besiktas.
Haddii ay Liverpool soo dhaafto kooxda Bolton waxay kulanka wareega shanaad la ciyaari doontaa kooxda Crystal Palace oo ay ku booqan doonto gurigeeda oo Reds dhib wayn ku ah.
Kabtanka Liverpool ee Steven Gerrard ayaa kulankan safan doona kulankiisii 700 aad ee waayihiisa ciyaareed ee Lierpool. Gerrard oo cadeeyay inuu Reds ka tagaayo dhamaadka xili ciyaareedkan ayaa la filayaa inuu caawa qayb ka ahaa kooxda Reds ee la ciyaari doonta Bolton.
Liverpool ayaa kulanka Bolton tagaysa iyada oo kalsooni fiican qabta kadib markii ay kulankii hore ee horyaalka ay guul 2:0 ah ka gaadheen kooxda West Ham. Reds ayaa dib u heshay Daniel Sturridge kaa soo kulankii West Ham inta uu soo laabtay haddan gool u dhaliyay.
Bolton ayaa dhaawacyo badani soo gaadheen waxaana ka dhaawacan Darren Pratley , Adam Bogdan, Emile Heskey, Marc Tierney, Mark Davies and Max Clayton laakiin weerar yahanka Craig Davies ayaa dhaawac ka soo laabanaya. Xidigii hore ee Reds Heskey ayaa laga yaabaa inuud dhaawac ku soogo kulankan
Hordhaca: Real Madrid vs Sevilla Iyo Los Bloncos Oo Doonaysa Inay Hogaanka Horyaalka Afar Dhibcood Ku Qabato
Real Madrid ayaa kooxda Sevilla caawa ku soo dhaweyn doonta Santiago Bernabeu, kulankan ayaana ah kulan labada kooxood baaqi u ahaa kaas oo dib loo dhigay kadib markii ay Real Madrid ka qayb galaysay koobka kooxaha aduunka ee ka dhacay Morroco.
Real Madrid ayaa hadda horyaalka La Liga ku hogaaminaysa hal dhibic,waxayna fursad u haysataa inay haddii ay kulankan guulaysato ay hogaanka ku qabato afar dhibcood oo saafi ah.
Real Madrid ayaa kulankan ciyaaraysa iyada oo natiijo fiican ka soo gaadhay kooxda Real Sociedad oo bilawgii ciyaareedkan guuldaro xun kala kulantay. Madrid ayaa Sociedad guula kaga gaadhay 4:1.
Ancelotti ayaa ku faraxsan qaab ciyaareedka Karim Benzema kadib markii uu xidiga ree France laba gool ka dhaliyay kulankii ugu danbeeyey ee Sociedad. Benzema ayaana Madrid u buuxiiyay booska uu Ronaldo ka ganaaxan yahay.
Real Madrid iyo Sevill ayaa hore xili ciyaareedkan ugu kulamay finalka UEFA Super Cup kaas oo Real Madrid ku qaatay guulo 2:0 ahayd. Laakiin Sevilla ayaa xusuusan guuldaradii kulankii 2013/14 ee ay Real Madrid ku xasuuqday 7:3.
Sevilla ayaa kulankeedii hore guul xidhiidhi ah ka soo gaadhay kooxda Espanyol. Xidiga Liverpool amaahda kaga maqan ee Iago Aspas ayaana dhamaadkii kulankaas goolka guusha u dhaliyay, waxayna guushaa ku gaadhay 3:2.
Crisitano Ronaldo ayaa Real Madrid wali ganaax kaga sii maqnaan doona wuxuuna marayaa kulankii ugu danbeeyay ee ganaaxiisa kadib markii uu dhib u gaystay ciyaartoy kooxda Cordoba ah.
Luka Modric ayaa wali ka sii maqnaan doona Real Madrid halka uu Pepe isagana uu shaki ku jiro inuu kulankan taam u noqon karo.
Waxaa laga yaabaa in James iyo Marcelo kursiga kaydka lagaliyo si looga ilaaliyo inay kaadh digniin ah qaataan taas oo haddii ay dhacdo ay seegi doonaan kulanka Mardid Derbi. James iyo Marcelo ayaa hal kaadh oo digniin ah ujira in hal kulan lagu ganaaxo.
Goolahayaha kooxda Sevilla ee Beto ayaa kulankii ay guusha ka gaadhay Espanyol ciyaarta dhaawac looga saaray lamana oga inuu taam unoqon doono kulanka Madrid.
Garsoorihii Sababta U Ahaa In Ay Tunisia Koobka Qaramada Afrika Ka Hadho Oo Lix Bilood Lagu Ganaaxay Isaga Oo Shaqadana Laga Joojiyay
Xidhiidhka kubbad cagta Afrika ee Caf ayaa go’aan ka soo saartay arintii muranka wayn iyo rabshadaha ka dhalisay tartanka koobka qaramada Afrika ee ay Tunisia kaga hadhay tartanka qaramada Afrika ee ka socda dalka Equatorial Guinea.
Caf ayaa garsoorihii arintan sababta u ahaa lix bilood ku ganaaxday isla markaana dalkiisii dib ugu celisay. Seechurn Rajindaparsad ayaa ahaa garsoorihii dhex dhexaadinayay kulankii qalalaasuhu hadheeyay ee Tinisia iyo wadanka koobkan marti galinaya ee Equatorial Guinea.
Garsoorahan ayaa ciyaarta oo dhamaanaysa oo maraysa daqiiqadihii ugu danbaysay ayaa rekoodhe aan jirin u dhigay Equatorial Guinea.Kabtankooda , Javier Balboa ayaana gool u badalay, ciyaarta ayaana noqotay barbaro 1:1 ah, waxaana ciyaarta lagu daray 30 daqiiqo oo waqtiga dheeriga ah. Ugu danbayn isla Javier Balboa ayaa goolka guusha udhaliyay E.Guinea.
Markii ay ciyaartu dhamaatay ayay rabshado ka bilaameen garoonka iyada oo ciyaartoyda Tunisia ay isku dayeen inay waxyeeleeyaan garsooraha waxaana meeshaas ka dhacday arin fool xun.
Tababaraha xulka qaranka Tunisia ee Georges Leekens oo ka hadlay rekoodha xulka qarankiisa guusha lagaga hor joogsaday ayaa yidhi: “Anigu 45 sanadood oo aan ku soo dhex jiray kubbada cagta, waligay maan arag wax sidan oo kale ah”.
Haddaba guddida garsoorayaasha xidhiidhka kubbada cagta Afrika ayaa muddo lix bilood ah ku ganaaxay garsoorihii kulankaas waxaana sidoo kale laga joojiyay shaqadii uu hadda ka hayay tartanka koobka qaramada Afrika. Garoorahan oo u dhashay dalka Muritania ayaa dib loogu celiyay dalkiisa.
Guddida garsoorayaasha ayaa yidhi: “Seechurn wuxuu ku guuldaraystay inuu joogeeyo maamulkiisa, wuxuuna sameeyay bandhig liita.boodhka anshax marintu waxay isaga ku ganaaxeen muddo lix bilood ah, waxaana laga saaray garsoorayaasha tartankan”.
Caf ayaa Tunisa ku ganaaxday 44 kun oo yuro kadib markii ay garoonka rabshado ka abuureen, waxaana laga doonayaa inay warqad raali galin ah soo qoraan inta ka horaysa jimcaha haddii kale waxay halis ugu jiraan in laga reebo tartanka koobka qaramada Afrika ee soo socda.
Equatorial Guinea ayaa iyadana lagu ganaaxay €4358 oo yuro kadib markii ay jamaahiirteedu soo galeen Bata stadium oo ay ka dhacday ciyaarta muranka dhalisay, waxa kale oo lagu eedeeyay inaysan amaanka si fiican u sugin.
Fiorentina Oo Roma Gurigeeda Kaga Cidhibtirtay Copa Italia Iyo Mario Gomez Oo Ahaa Halyayga Forentina
Kooxda Fiorentina ayaa u soo baxday wareega afar dhamaadka koobka Copa Italia kadib markii ay cashar lama ilaawaan ah kooxda Roma gurigeeda Stadiuo Oplimpico ugu soo dhigtay. Fiorentina ayaa kulankii ugu horeeyay oo nolol uu Cuadrado ka maqan yahay ciyaartay, waxayna guul 2:0 ah ka soo gaadhay Roma.
Roma ayaa gurigeeda ku soo dhawaysay kooxda Fiorentinia kulan ka tirsanaa wareega sideed dhamaadka Copa Italia, waxayna kooxda Rudi Carcia ku guuldaraysatay inay wax gool ah kulankan la timaado halka ay sidoo kale ku guuldaraysatay inay isdifaacdo.
Mario Gomez ayaa ahaa halyayga Fiorentina guushan u horseeday isla markaana dhulka ku jiiday kooxda martida loo ahaa ee Roma. Mario Gomez ayaa goolka hore kooxdiisa udhaliyay daqiiqdii 65 aad , waxaana goolkaas caawiye ka ahaa Manuel Pasqual.
Markale ayay ayuu daqiiqadii 89 aad Mario Gomez kooxdiisa udhaliyay goolka dhulka la galay Roma, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 2:0 ay Fiorentina hogaanka ku dheeraysatay isla markaan ay kalsooni wayn ku heshay, waxaana markale goolka Gomez caawiye ka ahaa isla Manuel Pasqual. ciyaarta ayaana ku dhamaatay 2:0 ay Fiorentina ugu soo baxday wareega afar dhamaadka Copa Italiya isla markaana ay tartanka kaga cidhibtirtay Roma oo gurigeedii joogtay.
Manchester United Oo Old Trafford Ku Dubatay Kooxda Cambridge United, Iyo Red Devils Oo Iska Xaadirasay Wareega Shanaad Ee FA Cupka
Kooxda Man United ayaa guul ay gurigeeda kaga gaadhay kooxda Cambridge United ugu soo baxday wareega afaraad ee koobka FA Cupka. Man United ayaa guushan ku gaadhay 3:0, waxaana goolasha u kala dhaliyay Jaun Mata Marcos Rojo iyo Wilson. Man United ayaa wareega shanaad ee FA Cupka usafri doonta kooxda Preston North End oo iyaduna guul 3:1 ah ka soo gaadhay Sheffield United.
Mancheser United ayaa Old Trafford ku soo dhawaynsay kooxda heerka afraad ee Cambridge United kula ku celis ahaa oo ka tirsanaa wareega afraad ee FA Cupka. Kulankii lagu soo ciyaaray guriga Cambridge United ayaa ku soo dhamaaday barbaro gool la’aan ah, waxayna Man United doonaysay inay dhinac iskaga dhibto kooxdan yar.
Tababare Van Gaal ayaa kulankan u soo doortay koox xoogan isaga oo shaxdiisa ugu xoogan la shir yimid, wuxuuna ka taxadirayaa inay kooxdiisa ku dhacdo layaabkii qabasaday Chelsea iyo Man City oo ay tartankan ka reebeen kooxo yar yari.Xidigha Man United ugu muhiisan De Gea, Rooney, Di Maria iyo Van Persie ayaa dhamaantood ku bilawday.Van Gaal ayaana ciyaarta ka hor sheegay in muhiimada ugu wayn ee Man United ee xili ciyaareedkani ay tahay inay qaadaan FA Cupka.
Daqiiqadii ugu horaysay ciyaartay ayay Cambridige United ku sigatay inay si lama filaan ah hogaanka ku qabato kadib markii qalad uu sameeyay Blind ay Man United u horseedi gaadhay in gool lagaga hormaro, waxaana goolkaas Cambridge United udhalin gaadhay Tom Elliott.
Laakiin Man United ayaa markiiba ciyaarta gacanta ku qabatay, waxayna goolkeeda kowaad la timid daqiiqadii 25 aad waxaana goolkaaas udhaliyay Juan Mata, ciyaarta ayaana noqotay 1:0 ay Man United hogaanka kula wareegtay.Marouane Fellaini ayaana caawiye ka ahaa goolka uu Mata United udhaliyay.
Waa goolkii ugu horeeyay ee uu Mata Man United uga dhaliyo koobka FA Cupka, laakiin Mata ayuu goolkani ahaa goolkiisii lixaad ee FA Cupka halka uu sidoo kale 9 gool oo kale oo FA Cupka ah caawiye ka ahaa intii uu Ingiriiska.
Man United ayaa dadaalkeeda sii kordhisay waxayna daqiiqadii 32 aad ayay Man United la timid goolka labaad waxaana udhaliyay Marcos Rojo, kaas oo markiisa ciyaarta ka dhigay 2:0 ay Red Devils hogaanka ku dheeraysatay. Rojo ayaa kubbad koorne ahayd oo ay Fallaini iyo Van Persie ka soo qayb qaateen isla makaana uu Di Maria soo tuuray ayuu goolkiisii kowaad iyo kan labaad kulankan ee Man United ku dhaliyay.qaybtii hore ee ciyaarta ayaana ku dhamaatay 2:0 ay Man United hogaanka ku haysay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay umuuqatay ciyaartu in go’aan laga gaadhay qaybtii hore waxayna inta badan iska ahayd mid aan wax goolal ah layska dhalinin. Iyada oo ciyaartu gaabis iskaga socoto ayaa badal lagu soo galiyay James Wilson iyada oo lagu soo badlay Van Persie.
Wilson ayaana kooxdiisa goolka saddexaad udhaliyay daqiiqadii 73 aad isaga oo ciyaarta ka dhigay 3:0 ay Man United ku xaqiiqsatay wareega shanaad ee FA Cupka.Goolka Wilson ayuu caawiye ka ahaa Ander Herrera oo isaga laftiisu ciyaarta badal ku soo galay.
Ugu danbayn kulankan ayaa ku dhamaaday 3:0 ay Man United guul ku gaadhay iyada oo Man United wareega shanaad ee FA Cupka usafri doonta kooxda Preston oo iyaduna guul 3:1 ah ka soo gaadhay Sheffield United.
Toban Ciyaarto Oo Bayern Munich Ah Oo Markale Taako Kala Kulmay Schalke04 Iyada Oo Bilawgii Ciyaartaba Kaadhka Cas Loo taagay Jerome Boateng
Kooxda Bayern Munich ayaa barbaro kala kulatay kooxda Schalke04 oo marti ugu haayd gurigeeda Aliaz Arena. waa kulankii labaad oo xidhidh ah ee ayna Bayern Munich guulaysan horyaalka Bundesligaha, waana markii ugu horaysay ee ay sidan oo kale ku dhacdo taniyo markii uu Pep Guardiola tababare u noqday sanakdii 2013. Bayern Munich iyo Schalke ayaa ku kala baxay barbaro 1:1 ah.
Bayern Munich oo kulankii hore guuldaro wayni ka soo gaadhay kooxda Wolfsburg ayaa doonaysay inay dib ugu soo laabato tubta guusha laakiin markii ay ciyaartu socotay 17 daqiiqo ayuu xaalku ku xumaaday kadib markii kaadhka cas oo toos ah la siiyay Jerome Boateng, waliba waxaa Bayern Munich lagu dhigay rekoodhe, laakiin Manuel Neuer ayaa rekoodhahaas kooxdiisa ka badbaadiyay.qaybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbaro gool la’aan ah.
Qaybtii danbe ee ciyaarta ayay Bayern Munich oo 10 ciyaartoy lagu soo yareeyay ayaa dadaal ugashay inay ciyaarta wax ka badasho oo ay shabaqa soo taabato. daqiiqadii 67 aad ayuu Arjen Robben kooxdiisa Bayern udhaliyay goolka furitaanka, waxayna ciyaartu noqotay 1:0 ay Bayern hogaanka ku qabatay.
Hogaanka Bayern Municha ayaan sii waarin waxaana daqiiqadii 72 aad kooxda Schalke goolka barbaraha ukeenay enedikt Höwedes, kaas oo markiisa ciyaarta ubadalay barbaro 1:1 ah. ugu danbayn ciyaarta ayaa barbaro 1:1 ah ku dhamaatay.
Bayern Munich ayaa kulankii labaad oo xidhiidh aan guul gaadhin,waxayna laba kulan oo isku xiga lumisay shan dhibcood. Bayern ayaa wali hogaanka ku hogaaminaysa 8 dhibcood iyada oo leh 46 dhibcood halka kooxda ku soo xigta ee Wolfsburg ay leedahay 38 dhibcood.